MARAIS-MASAY SY IVATO : Nahitana fatim-behivavy miisa roa ny alatsinainy maraina teo
Omaly alatsinainy maraina avokoa no nahitana ny fatin’ireo vehivavy miisa roa, hita sary niparitaka teny amin’ny tambajotra sosialy “facebook”. 4 février 2019
Raha ny loharanom-baovao voaray misimisy kokoa, ny iray dia tovovavy mbola vao tanora no hita natsingevan’ny rano teny Marais-Masay. Ireo mpandeha tongotra nandeha vao maraina no nahatsikaritra azy voalohany, ary niantso ireo olona teny amin’ny manodidina mba hizaha ny zava-misy.
Nesorina tao anaty rano ny razana. Rehefa nosavana dia mbola hita teny aminy ny finday fampiasany, niampy vola tany anaty paosiny. Somary nahitana mangana anefa ny faritra teo amin’ny tendany raha ny filazan’ireo nahita maso ny razana ary ahiana ho nisy namono araka izany ity tovovavy ity, izay vao natsipy tao anaty rano. Eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana moa ny fanohizana ny famotorana momba ny raharaha ary efa lasan’ny fianakaviana ny razana.
Ny teny amin’ny kaominina Ivato fokontany Fitroafana indray dia renim-pianakaviana somary nahazo taona no hitan’ny mponina teny amin’ny manodidina tsy nisy aina intsony. Samy tsy nisy nahafantatra izay tena nanjo azy mazava ny rehetra ary tsy nisy nahalala izay fianakaviany rahateo koa. Raha ny vinavina nolazain’ny mponina manoloana ny zava-nitranga fotsiny dia mety ho hanoanana no nahafaty azy satria tsy mba nahitana ratra na mangana akory ny tenany iray manontolo. Avy hatrany dia nandray an-tanana ny raharaha ny tompon’andraikitra teny an-toerana io omaly io.